FANDRAKETANA NY BASY
Mahatratra enina alina ireo basy eny an-tanan’ireo sivily voarakitra ao amin’ny talen’ny fanompoam-pirenena sy fianry eo anivon’ny tafika malagasy. Hisy ny fanavaozana izany sy fitsirihana ireo basy tsy ara-dalana eny ampelatan’olo-tsotra isak’ireo distrika 119 manerana ny nosy. Hisy ihany koa ny fanentanana ireo tanora Malagasy feno taona mba hanao ny fitsarana miaramila.
Ny faritanin’i Toliara no ahitana basy eny an-tanan’olo-tsotra be indrindra raha ny antotan’isa eo ampelatananan’ny talen’ny fanompoana sy fiandry eo anivon’ny tafika malagasy. Ny ankamaroan’ireo anefa dia tsy voasoratra eny anivon’ny sampandraharaha miandraikitra izany isaky ny distrika. Miteraka tsy fandrimpahalemana goavana ho an’ny fiaraha-monina misy anefa ny fiparitahan’izany basy izany. Antony mampirongatra ny asan-dahalo sy ny tsy fandrimpahalemana any amin’iny faritra atsimon’ny nosy iny.manoloana izany, hisy ny fanavaozana ny fitanana an-tsoratry ireo basy eny antanan’olo-tsotra amin’ireo distrika 119 manerana ny nosy.
Mifanindry an-dala amin’izay fanavaozana ny fandraketana ny basy ara-dalana eny an-tan’olo-tsotra izay, hisy ihany koa, ny fanentanana ireo zatovolahy feno 19 mba hitsara miaramila. Raha araka ny lalana manan-kery et o amin’ny tanin’i Repoblikan’i Madagasikara, tokony hanao izay avokoa ireo tanora feno 19 ka hatrami’ny 31 taona na tsy hanao fanompoam-pirenena aza.
Nisy ny atrik’asaentina hampianarana ireo miaramila sy zandary amin’ny famenoana ireo taratasy entina hanavaova ny firaketana an-tsoratra ireo basy ara-dalana eny antanan’olo-tsotra androany teny amin’ny Cercle Mess Soanierana . Voamarika nandrita ity fanokafana atrikasa ity fa maro ireo lesoka hita tamin’ny fanatanterahana ireo fiandraiketana ny basy eny an-tanan’ny olon-tsotra ary hanatsarana sy hifehezana bebe kokoa ny fandriampahalemana no anton’izao. Ho fanatsarana nya fitahirizana izany dia ho raiketina hanaraka ny fenitry ny niomerika izany na « version numérique ».